Nguva yekudzoka uye yekumaski mvumo yakaunzwa zvakare muRomania pakati peCOVID-19 surge
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Romania Kupwanya Nhau » Nguva yekudzoka uye yekumaski mvumo yakaunzwa zvakare muRomania pakati peCOVID-19 surge
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Romania Kupwanya Nhau • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Secretary of State weRomania ku Ministry of Interior, anotungamira Dhipatimendi reEmergency Situations (DSU), Raed Arafat
Romania parizvino iri pakati peyakaipisisa dambudziko rehutano kubva pakatanga denda re COVID-19 repasi rose.
Manheru ekudzoka uye masks ekumanikidza anodzoreredzwa muRomania se COVID-19 kesi spike.
Kubva 10pm kusvika 5am kufamba kwese kwevanhu kucharambidzwa munyika yese.
Kuwanika kwezvivakwa zvese zveveruzhinji uye kune zvese zviitiko zveveruzhinji uye zviitiko zvinongobvumidzwa kune vanhu vane 'green chitupa'.
Secretary of State weRomania ku Ministry of Interior, anotungamira Dhipatimendi reEmergency Situations (DSU), Raed Arafat, yakazivisa kuti hurumende yenyika iri kudzoreredza nguva yekurambidza husiku uye mask mask munzvimbo dzose dzeveruzhinji.
"Kubva na10 manheru kusvika na5: 00 mangwanani, kufamba kwevanhu kucharambidzwa munyika yese," mukuru weDSU akadaro pamusangano nevatori venhau, achitsanangura kusarambidzwa kwechirambidzo chevaya vakabayiwa kana kuti vachangopora kubva kuCOVID-19.
Romaniya parizvino iri pakati peyakaipisisa dambudziko rehutano kubva pakatanga chirwere che COVID-19 chepasi rose.
Kutanga nhasi, kupfekedzwa kwemasikisi ekudzivirira kumeso kunosungirwa muRomania, munzvimbo dzemukati nekunze dzeveruzhinji, pamwe nekubasa uye nezvifambiso zveveruzhinji, akadaro Arafat.
Kuwanika kwezvivakwa zvese zveveruzhinji pamwe nezvose zviitiko zveveruzhinji uye zviitiko zvinongobvumidzwa kune vanhu vane 'green chitupa'.
Matanho matsva ekudzora akasetwa nezviremera anotanga kushanda neMuvhuro unouya kwemazuva makumi matatu, akadaro Arafat.
Iyo denda mamiriro mukati Romaniya yakadzikira nekukasira kubva pakupera kwaGunyana, isina kukwana yekuvhara mishonga inosvika makumi matatu muzana chete uye kusateedzera matanho ekudzivirira inofungidzirwa kuti ndizvo zvikonzero zvikuru zvekuwedzera.
Vhiki rino, nyika yekumabvazuva kweEurope yakanyoresa rekodhi hutachiona hwezuva nezuva hutsva hweCOVID-19 hwe18,863, uye 574 kufa.